ပင်မစာမျက်နှာ အသိုင်းအဝိုင်းခံစားပါ ဒဏ္thာရီဆန်ဆန်ပွေ့ဖက်ထားသောနွေရာသီကိုပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့သည်
ငါတို့သူတို့ကိုဘယ်လောက်လွမ်းခဲ့ကြလဲ။ သူတို့ကငါတို့ရဲ့ဘ ၀ နဲ့ငါတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေရဲ့ပန်းခြံထဲကနေတစ်နှစ်ခွဲလောက်တားမြစ်ခံခဲ့ရတယ်။ အန္တရာယ်များလွန်းသည်။ ကပ်ရောဂါသည်ကျွန်ုပ်တို့ထံမှဤပျော်ရွှင်မှုကိုလည်းဖယ်ရှားခဲ့သည်။ အဆုံးမဲ့ခံစားချက်နှင့်စိတ်ခံစားမှုများ၊ ပျော်ရွှင်မှုနှင့်နာကျင်မှု၊ အချစ်နှင့်ခင်မင်မှု၊ စည်းလုံးညီညွတ်မှုနှင့်နီးစပ်မှုတို့ကိုစုစည်းပေးသောလက်ဟန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါတို့သူတို့ကိုပြန်လွတ်လာဖို့စောင့်နေရင်းငါတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာသူတို့ကိုရပ်ထားလိုက်တယ် ပွေ့ဖက်ခြင်း။ နောက်ဆုံးတော့နွေရာသီရောက်လာပြီ၊ ဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုကနည်းနည်းအားနည်းသွားပြီးငါတို့ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့အလေ့အထတွေကိုငါတို့ပြန်ဆက်သွယ်နိုင်တယ်။ ပွေ့ဖက်မှုများသည်သံသယအချို့နှင့်ဖုံးကွယ်ထားသောကြောက်ရွံ့မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသော်လည်းဘား၌ကော်ဖီနှင့်စားသောက်ဆိုင်တွင်နေ့လည်စာသည်ယခု အန္တရာယ်များ ငါတို့ကိုင်တွယ်နိုင်တယ်။
နောက်ဆုံးတော့ ၂၀၂၁ ရဲ့နွေရာသီဟာကပ်ရောဂါကြောင့် ၂၀၂၀ မှာရွှေ့ဆိုင်းခဲ့တဲ့ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့အားကစားပွဲတွေရဲ့နွေရာသီကိုရောက်လာခဲ့ပါပြီ။ ယူရို 2020 ဘောလုံးနှင့် ၂၀၂၀ တိုကျိုအိုလံပစ် ၂၀၂၁ တွင်ကျင်းပမည်ဖြစ်သော်လည်းစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းနှင့်စပွန်ဆာပေးမှုတို့ကြောင့်ပွဲစဉ်နှစ်ခု၏နာမည်မှာမပြောင်းလဲခဲ့ပါ။ ဥရောပဘောလုံးပြိုင်ပွဲသည်လွန်ခဲ့သောသီတင်းပတ်အနည်းငယ်ကသာပြီးဆုံးခဲ့ပြီးတိုကျိုအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲများကျင်းပနေဆဲဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးသုံးပတ်မှာငါတို့တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အတိုင်းအီတလီအားကစားအတွက်ဒီလောက်တိုးတက်နေတဲ့ကာလကိုမင်းမမှတ်မိဘူး။ ကြီးကျယ်သောနိုင်ပွဲများ၊ ကြီးကျယ်သောအားကစားသမားများ၊ ကြီးမြတ်သောအမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများသည်ထိုအောင်ပွဲများနောက်ကွယ် ထူးခြားသောရလာဒ်၏ရွှင်လန်းမှုသာမက၊ ဆူညံသံများကြောင့်သို့မဟုတ်အနည်းနှင့်အများဆူညံသံများ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုနက်ရှိုင်းသောခံစားမှု၊ ဝေမျှလိုစိတ်ပြင်းပြမှုတို့ရှိသည်။
Mythical Hugs ၏နွေရာသီသည်ပြန်လည်တွေ့ရှိပြီးဗိုင်းရပ်စ်ပျောက်သွားသည်
ထိုအထီးကျန်ကာလကြာရှည်ခြင်းသည်အခြားသူအားကျွန်ုပ်တို့၏ဆန္ဒကိုသိသိသာသာကြီးထွားစေခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ် ဦး ခံစားနိုင်ရန်တစ် ဦး ကိုတစ် ဦး ပွေ့ဖက်လိုသည့်ဆန္ဒကိုကျွန်ုပ်တို့အတွင်း၌ခံစားရသည်နှင့်တူသည်။ ပြီးတော့သူ့ရဲ့သဘာဝအကျဆုံးအမူအယာတွေကတဆင့်ဘယ်တုန်းကမှအားကစားမလုပ်ခဲ့ဖူးဘူး၊ ငါတို့ကိုဒီမက်ဆေ့ခ်ျအတိအကျပို့ခဲ့တယ်။ သင်မေးခံရလျှင်၊ ယူရို ၂၀၂၀ တွင်အီတလီ၏အောင်ပွဲခံပုံကိုသင်ဘယ်လိုထင်သလဲ။ အားလုံးမဟုတ်ပေမယ့်အားလုံးနီးပါးကအဖြေပေးလိမ့်မယ် ရောဘတ်တိုမန်စီနီ, Azzurrie၏နည်းပြ Gianluca Vialli, အီတလီအမျိုးသားအသင်း၏ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဤတိုကျို ၂၀၂၀ အိုလံပစ်ပွဲစဉ်များအတွင်း၌ကျွန်ုပ်တို့၏အားကစားသမိုင်း၌ပါ ၀ င်ခဲ့သောစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အောင်ပွဲများနှင့်အံ့သြဖွယ်ရာများနှင့်အတူသြဂုတ်လ ၁ ရက်တနင်္ဂနွေနေ့တွင် Gianmarco TamberieMarcell Jacobs ပါ, အံ့မခန်းရွှေတံဆိပ်နှစ်ခုကိုဆွတ်ခူးနိုင်သူ၊ ပထမအကြိမ်အမျိုးသားမီတာ ၁၀၀ အပြေး၌ဒုတိယ၊ မီတာ ၁၀၀ အပြား၌ဒုတိယ၊ အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲ၏ဘုရင်မဖြစ်ပြီးနောက်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး မိနစ်အနည်းငယ်အကွာ၌အနိုင်ယူသည်။
ရောဘတ်တိုမန်စီနီeGianluca Vialli၊ သမိုင်းဝင်ချစ်ကြည်ရေး၊ တစ်သက်တာတည်မြဲမည်မရ။ Gianmarco TamberieMarcell Jacobs ပါ တိုကျိုမြို့ပြေးခုန်ပစ်အားကစားလမ်းကြောင်းပေါ်တွင်ဖူးပွင့်ခဲ့သောချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုသည်သမိုင်း၌ကျဆုံးမည့်အခိုက်အတန့်၏သမီးဖြစ်သောကြောင့်သမိုင်းဝင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။. အားကစားသမိုင်းကို ကျော်လွန်၍ အားကစား၌ဖြစ်နိုင်သည်၊ ပွေ့ဖက်ခြင်းအမူအရာသည်အဓိပ္ပာယ်များစွာကိုချုံ့ပစ်လိုက်သည်။ ထိုပွေ့ဖက်မှုနှစ်ခုတွင်တူညီသောနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ခံစားချက်များ၏ဒီလှိုင်းကိုပေါင်းစပ်ခြင်း၊ ဘက်ပေါင်းစုံနှင့်အမြဲအပြုသဘောမဆောင်သောကိုယ်ပိုင်နှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘဝပုံပြင်များ၊ ၎င်းသည်အလုပ်အကိုင်၏အဆုံးအဖြတ်အခိုက်အတန့်များတွင်၎င်းဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ ဖျက်ဆီးခံရခြင်း၊ နာကျင်ခြင်း၊ ကြောက်စရာကောင်းသောရောဂါများ၊ အရာအားလုံးကိုဘေးဖယ်ထားရန်နှင့်ဘဝ၌အခြားအရာများကိုစတင်လုပ်ဆောင်လိုသောဆန္ဒ၊ ထို့နောက်သူတို့ကိုယ်တိုင်သို့မဟုတ်မသိသောသူများအားအမျိုးမျိုးသောလက်စားချေမှုများအတွက်ပြန်လည်ကြည့်ရှုရန်ပြန်စဉ်းစားပါ။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့။
အဲဒီပွေ့ဖက်မှုနှစ်ခုမှာငါတို့အချစ်ဆုံးတွေ၊ အဖေတွေ၊ အမေတွေ၊ ဇနီးတွေ၊ ကလေးတွေ၊ ကမ္ဘာကြီးကိုပွေ့ဖက်ချင်တယ်၊ အဲဒီ့ပန်းတိုင်တွေကိုအတိအကျရောက်ဖို့အချိန်တွေယူခဲ့တဲ့သူတွေအားလုံး၊ ပြီးမြောက်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ပန်းတိုင်တွေကိုအတိအကျရောက်ဖို့အချိန်တွေယူခဲ့တယ်။ သူတို့ကိုအိပ်မက်ပြောပြဖို့နည်းလမ်းက "ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ငါအိပ်မက်ကိုလိုက်ရှာဖို့မင်းကိုလျစ်လျူရှုခဲ့တဲ့အချိန်တိုင်းအတွက်တောင်းပန်ပါတယ်" ယခုအိပ်မက်သည်အကောင်းဆုံးသတ္တုခွက် (သို့) ဆုတံဆိပ်များဖြင့်ကိုယ်စားပြုသည်။ အခုအိမ်မက်ကရှိနေတယ်၊ ​​လူတိုင်းကအဲဒါကိုဖြစ်လာအောင်ကူညီပံ့ပိုးပေးတဲ့အတွက်လူတိုင်းကပိုင်တယ်။ လူတိုင်းကသူ့အပိုင်းအစကိုထည့်ပြီးဒါကအိမ်မက်ကိုပိုလှပစေသည်။ ဤအရာများနှင့်များစွာသောအရာများသည်ဘဝတစ်ခုကိုပေးခဲ့သည်။စိတ်လှုပ်ရှားမှု. ထူးခြား. မဖော်ပြနိုင်ပါ။ ငါတို့သူတို့ကိုဘယ်လောက်လွမ်းခဲ့ကြလဲ။ ခုတော့သူတို့ကိုဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အချိန်လေးမှာတွေ့တာကငါတို့ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာတွေအတွက်နောင်တရစေရုံသာမကဘဲငါတို့ကိုပြန်ပွေ့ဖက်ဖို့တောင်ပိုဆန္ဒပြင်းပြလာစေတယ်။ Mythical Hugs ရဲ့နွေရာသီကိုပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် ငါတို့ရဲ့ Fantastic Four နဲ့သူတို့ရဲ့ Fantastic Hugs တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Alda Merini ၏ "သင်၏လက်၌"
ကမ္ဘာကြီးမှာနှလုံးခုန်မြန်တဲ့နေရာ၊ မင်းအသက်ရှူမဝတဲ့နေရာမှာရှိနေတယ်၊ ​​မင်းစိတ်ခံစားချက်ဘယ်လောက်ရှိတယ်၊ အချိန်တွေရပ်ပြီးမင်းအသက်မရှိတော့ဘူး၊ စွဲမက်ဖွယ်စိတ်ကူးယဉ်မှုကငါတို့ရဲ့နွေးထွေးမှုကိုခံစားရတာမဟုတ်သလိုစိတ်ကအသက်မရှည်တဲ့နေရာကမင်းရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာရှိနေတယ်။ အဲနေရာကနေငါလွတ်မြောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ အချစ်ကြောင့်ဘယ်သူကငါ့ကိုပျံသန်းအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာသိတယ်။
ယခင်ဆောင်းပါးKaty နှင့် Orlando တို့သည် Capri ၌ရှိသည်
နောက်ဆောင်းပါးHalsey သည် Ender Ridley ကို Instagram တွင်နို့တိုက်ခဲ့သည်